Bella Hadid anofunga Selena Gomez ari 'kushandisa' The Weeknd - Nhau
Bella Hadid anonzi anofunga kuti Selena Gomez ari 'kushandisa' The Weeknd
Rex USA AP Getty Mifananidzo North America Getty Mifananidzo North America Getty Mifananidzo North America Rex USA Rex USA Mukurumbira Flynet IYI / FAMEFLYNET MIFANANIDZO / Wonderwall Splash Nhau Invision / AP Rex USA Goverana Tweet Pin Email
Mariri nekuda kwezvikonzero chaizvo? Bella Hadid iri kukurumidza kuve isingafarire Selena Gomez , uye ane chokwadi chekuti muimbi ane zvakashata zvinangwa kana zvasvika kune iyo hukama hunotanga pakati paSelena naBella wekare, The Weeknd.
'Bella akasvika kuna [The Weeknd] kakati wandei ndokumuudza kuti Selena arikumushandisa,' 'a source padhuze naBella akaudza Us Weekly. 'Anofunga kuti ane godo chete uye haasi kumuteerera.'
Pfungwa dzaVictoria Chakavanzika dzinouya mushure memifananidzo yakaburitswa svondo rapfuura inoratidza Selena uye The Weeknd [zita chairo Abel Tesfaye] vachiita kuLos Angeles. Mimwe mifananidzo yakavaratidza vakabata maoko.
Bella, uyo akadanana naAbel kwegore nehafu pamberi kutsemuka mukupera kwa2016, inonzi yakajeka uye anonzwa kumashure nemuimbi 'Wemaoko Kwangu'.
Iyo modhi yakakurumidza kusateedzera Selena pa Instagram mushure mekunge mapikicha aburitswa.
TMZ nguva pfupi yadarika inotora zvinyorwa padhuze naBella uyo anoti anonzwa kutengeswa nemumwe wake kamwechete pal Selena yekufambidzana muchivande The Weeknd kwemwedzi miviri yapfuura. Masosi anotiwo vaviri vatsva vakatopedza mazororo pamwe chete.
Bella anonzi akatonyanya kushatirwa kuti Selena haana kubvira ataura peep nezverudo rwuri kutanga kwaari kana mukoma wake mukuru Gigi Hadid - uyo Selena anoverengeka seimwe yeshamwari dzake dzepamwoyo.
'Kupa Bella naGigi misoro kumusoro kwaigona kunge kuri chinhu chinokudzwa uye chinokudzwa kuita ... asi ndinofungidzira kuti iHollywood chete,' akadaro Source akaudza TMZ.
Selena neThe Weeknd vanonzi vakaungana pamwe chete vachibatana pamimhanzi nyowani pamwechete.
'Vakatanga kurembera seshamwari uye zvakazoita zvekudanana,' sosi yakaudza Us. 'Vari kushanda pamumhanzi wakanyanya, saka wakadeuka.'
Munguva yakapfuura, Selena ane nhoroondo yekudyidzana nevamushandi vemimhanzi, achinzi akambozviita kare naZedd uye Charlie Puth . Bella anofunga chinhu chimwe chete icho chiri kuitika newaimbova murume wake.
Miranda Lambert uye murume Brendan McLoughlin vane mutsva 'wemhuri'
Josh naAnna Duggar vakatarisira mwana wechitanhatu
Makumi mapfumbamwe evana mafirimu pane netflix
eminem ane musikana here
amber ane kuchengetwa kwaLeah